Xogo dheer ah oo laga helay Wadahadalka dowlada Soomaaliya iyo Jubbaland
Macluumaad ku saabsan qofka labaad ee u shaqeeya xafiiska UN-ka ee Soomaaliya ee qaadey Coronavirus. Riix Halkan
KISMAAYO, Soomaaliya - Sida uu horey u baahiyay warsidaha Garowe Online [Halkan ka akhri], waxaa magaalada Nairobi ee caasimada Kenya ka qabsoomay kulamo lagu dhex-dhaxaadinayo dowlada dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland.
Kulamadaasi oo uu dabada ka riixayey Fahad Yaasiin, agaasimaha ku xigeenka Sirdoonka Soomaaliya, ayaa qabsoomay kahor shirka Maarso la filayo in uu ka qabsoomo magaalada Garowe la isugu soo dhawayn lahaa labada dhinac.
Illo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay Garowe Online in wajiga labaad ee wadaxaajoodyada lagu heshiisinayo Villa Somalia iyo Jubbaland ay todobaadka soo aadan ka dhici doono magaalada Kismaayo.
Xogta ayaa intaasi ku daraysa in ay suurtagal tahay in Ra’iisul Wasaare Khayre uu qayb ka noqdo wadahadaladaasi, oo noqoneysa markii 2aad uu tego caasimada goboleedka Jubadda Hoose.
Dowlada uu hogaamiyo Farmaajo ayaa tan iyo markii ay xafiiska timid waxay aad ugu mashquulsanayd sidii ay meesha uga saari lahayd Madaxwaynayaasha maamulada, taasi oo qayb kamid ah ay ku guuleystay.
Hasa yeeshee, sidii ay jagada uga tuuri lahayd Axmed Madoobe, madaxwaynaha Jubbaland oo tan iyo 2013-kii talada haya ayaa la sheegayaa inay noqon doonto wax aad u adag, sababta oo ah saameyntisa iyo taageerada uu ka heysto Kenya.
Villa Somalia ayaa la sheegay inay ku fashilantay in ay saameyn ku yeelato tartankii madaxtinimo ee Puntland taasi oo kusoo baxay Saciid Cabdullaahi Deni, isagoo xisbina ka socon, waxana uu bedalay Cabdiwali Gaas oo xafiiska joogey [2014-2019].
Cabdullaahi Salaad Oomaar, wasiirka duulista iyo hawada Xukuumada Khayre ayaa la fahansan yahay in uu noqonayo musharax Madaxtooyada ay dabada ka riixayso in tartanka madaxtinimada JL kasoo muuqan doona.
Bisha Agoosto ee sanadkaan 2019 ayaa la rajeynayaa in ay qabsoonto doorashada Jubbaland, taasi oo si wayn isha loogu hayo, iyadoo Axmed Madoobe uu u xusul-duubayo sidii markale loogu dooran lahaa Kursiga.
Axmed Madoobe oo magacaabay Guddiga Doorashooyinka Jubbaland
Soomaliya 24.03.2019. 10:19
Doorashadda Jubbaland ee soo socota ayaa isha lagu wada hayaa, iyadoo cabi laga qabo faragelin.
Khilaafka Kenya iyo Soomaaliya oo salka ku haya Madaxtinimada Axmed Madoobe
Soomaliya 17.02.2019. 16:10
Axmed Madoobe oo weerar afka ah ku qaadey dowladda Soomaaliya
Soomaliya 17.05.2018. 20:16
Beesha Caalamka oo dhexdhexaadineysa DF iyo Jubbaland
Soomaliya 07.09.2019. 16:56
Shir ka furmay Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo eedeyn u jeediyay DF
Soomaliya 07.11.2018. 13:34
Jubbaland oo dib u qaabayn mug leh ku sameynaysa dhakhliga
Soomaliya 24.10.2019. 16:07
Mas'uuliyiin ku dhaawacmay qarax ka dhacay caasimada HirShabelle 04.04.2020. 20:15
Mataano dhowaan dhashay oo loogu magacdaray Corona iyo Covid 04.04.2020. 18:45
Soomaaliya: Qofkii labaad oo UN-ka u shaqeeya oo qaadey Covid-19 04.04.2020. 16:32
DF oo hay'addo ku eedeysay kufsi loo geystay gabdho saddex jir ah 04.04.2020. 15:06
Deni oo isbedel ku sameeyay talisyada booliska Mudug, Karkaar iyo Nugaal 04.04.2020. 14:28
Axmed Madoobe oo amar kasoo saarey colaada duleedka Kismaayo 04.04.2020. 12:36